कसरी नेटवर्क दुई कम्प्युटर जडान गर्न
आज एक भन्दा बढी घर कम्प्युटर वा ल्यापटप छ यस्तो दुर्लभ घटना छैन। अक्सर, तपाईं दुई कार छ भने अर्को एक उपकरण केही स्थानान्तरण जानकारी भनेर आवश्यक छ। हामी अपेक्षाकृत सानो फाइलहरू सार्न आवश्यकता कुरा भने यो सम्भव हटाउन सकिने प्रयोग गर्न छ भण्डारण मिडिया, उदाहरणका लागि, एक USB फ्लैश ड्राइव वा डिस्क, तर यदि हामी जानकारी को महत्वपूर्ण मात्रा को स्थानान्तरण बारेमा कुरा गर्दै छन्, त्यसपछि त्यहाँ छिटो धेरै र अधिक व्यावहारिक नेटवर्क कार्ड मार्फत दुई कम्प्युटर को संयोजन प्रयोग छ। जडान र यसको लाभ को यस प्रकार हेरौं।
कसरी जडान गर्न दुई कम्प्युटर छानबीन छन्
यो गर्न, यो साथै, एक केबल-क्रसओभर प्रयोग गर्न दुवै यन्त्रहरूमा नेटवर्क कार्ड सञ्चालन पर्याप्त छ। नेटवर्क कार्ड चयन गर्न पर्याप्त छ भन्ने प्रमाणित गर्न "सुरुवात" मेनुमा "मेरो कम्प्युटर" चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि ट्याब "हार्डवेयर", जाने कहाँ चयन गर्नुहोस् "उपकरण प्रबन्धक" विकल्प। नेटवर्क कार्ड अन्तर्गत नाम «नेटवर्क जडान» प्रदर्शित गर्न सकिन्छ वा अन्यथा, उसलाई समान। यो खण्ड प्रदर्शित हुन्छ भने, या त कम्प्युटर यो अवस्थित छैन, वा यो BIOS मा असक्षम गरिएको छ। दोस्रो नक्सामा - केबल तयार र उपलब्धता र नेटवर्क कार्ड को प्रदर्शन जाँच पछि, त्यहाँ दुई कम्प्युटर, शारीरिक नेटवर्क जडान गर्न केबल पहिलो उपकरणको नेटवर्क कार्ड मा प्लग गर्नुपर्छ को एक अन्त, र अन्य लागि आवश्यक छ। कि खडा गरेपछि उपकरण प्रबन्धक "ठीक", प्रत्येक मिसिन प्रत्येक कार्डको लागि "प्रयोगमा उपकरण" स्थिति सेट त्यसपछि।
प्रत्येक लागि कदम को एक अनुक्रम: कसरी दुई कम्प्युटर जडान गर्न
दुवै उपकरणहरूको लागि नै कार्यहरू सेटिङ लागि अनुमति दिन्छ कि प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। मुख्य नियन्त्रण प्यानल को "सुरुवात" मेनुमा पहिलो स्थान मा "नेटवर्क र इन्टरनेट जडानहरू।" फेला गर्नुपर्छ अर्को, खोल्नुहोस् "गुण", जो चयन ट्याब, जो स्थानीय समावेश मा नेटवर्क जडानहरू, हामी "सामान्य" ट्याबमा रुचि कहाँ। यो ट्याबमा, तपाईं TCP / IP चिन्ह समावेश भएको प्रोटोकल संग लाइन मा पाठ चयन गर्नुपर्छ, त्यसपछि "गुण" मा क्लिक गर्नुहोस्। अब, तपाईं एक विशिष्ट आवश्यकता क्षेत्र भर्न कहाँ विशिष्ट IP ठेगाना, प्रयोग गर्न आवश्यकता संकेत जो वस्तु, विरुद्ध चेक मार्क राख्न हुँदैन। तपाईं हामी प्रत्येक कम्प्युटरमा कार्यहरू नै सेट उत्पादन, त्यसैले पहिलो र दोस्रो कार को गुण लागि hereinafter सेट गरिने सम्झना छ।
दुई कम्प्युटर कसरी जडान गर्न: यो सम्पत्ति राख्न
पहिलो मिसिन: आईपी-ठेगाना प्रविष्ट छ - 192.168.0.110; अर्को सेट सबनेट मास्क दुवै को रूप मा अवस्थामा लागि - 255.255.255.0; पहिलो मामला लागि मुख्य गेटवे उजागर पछि - 192.168.0.110; र उपयुक्त DNS-सर्भर को अन्त्यमा, तपाईं सेट गर्नु पर्छ - 192.168.0.110; हालै, क्षेत्र भर्न आवश्यकता छैन।
दोस्रो मिसिन: आईपी-ठेगाना प्रविष्ट छ - 192.168.0.111; दुवै मिसिन नै subnet मुखौटा पहिले नै उल्लेख रूपमा स्थापना गर्न आवश्यक; अब मुख्य गेटवे दोस्रो मामला लागि - 192.168.0.110; रुचाइएको वा उपयुक्त पहिलो जस्तै DNS-सर्भर सेट गर्न बायाँ; अब केहि भर्न आवश्यक छ।
कसरी जडान गर्न दुई कम्प्युटर अन्य गुणहरू सेट अप
अब हरेक उपकरणमा "मेरो कम्प्युटर" आसपास manipulator मा राइट क्लिक गर्नुपर्छ र त्यसपछि गुण चयन गर्नुहोस्। अब तपाईं कहाँ "परिवर्तन" क्लिक गर्न कम्प्युटर को नाम संग ट्याब चयन गर्न आवश्यक छ। यहाँ हामी के उपकरण नाम र कार्यसमूह नाम कन्फिगर गर्न छ आउँछन्। कम्प्युटरमा अर्थपूर्ण नाम चयन लागि, र सम्झना, तिनीहरूले फरक छ। महत्वपूर्ण दुवै उपकरणहरूको लागि, तिनीहरूले काम समूह, जसको लागि तपाईं सान्दर्भिक अनुच्छेद को नाम निर्दिष्ट एक को सदस्यहरू छन्। एक पटक यी मापदण्डहरू सबै मिसिन रिबुट गर्न आवश्यक छ।
कि यो केबल मार्फत दुई कम्प्युटर कसरी जडान गर्न बारेमा छ सबै छ। प्रत्येक अन्य उपकरणहरू मा जानकारी को उपलब्धता सन्दर्भमा, आवश्यक फोल्डर वा ड्राइभमा आफ्नो विवेकमा लागि खुला पहुँच हुन अनिवार्य छ। तपाईं सञ्चालन प्रणाली समावेश एक बाहेक सबै ड्राइव गर्न सक्छन्, र यो एक अलग नेटवर्क फोल्डर, जानकारी साझेदारी गर्न प्रदान गर्नेछ जो आवंटित गर्न सम्भव छ।
कसरी "संपर्क" मा गीत थप्न सिक्न
सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल: र्याङ्किङ्ग
सर्भर "Shareman" कुनै जडान: के?
स्क्राच देखि "tweeters" कसरी प्रयोग गर्ने
राउटर कसरी एक घर नेटवर्क सिर्जना गर्न को समस्या solves
Genitive। अर्थ र प्रयोग
Suvorov स्नान - तातो पानीका मुहानहरू
कागति चीनी को एक जार मा - एक नुस्खा। कागति को शरीर को लागि लाभ
ट्रपिकल Liana - कोबे। रोपण र हेरविचार
"हंटरका टिप्पणीहरू": कथा "बिरुइक" को मुख्य विषय के हो?
रास्पबेरी पात चिया। को पेय र यसको गुण को प्रयोग
संस्कृति को अवधारणा: कर्पोरेट र संगठनात्मक
सलाद ड्रेसिङ समुद्री। सलाद लागि सस। झिंगे संग सलाद लाउने
जॉन माल्कोभिच: हलीवुड अभिनेता को जीवनी र फिलिमोग्राफी
Vetrovlagozaschitnaya झिल्ली "Izospan": प्राविधिक विनिर्देशों, स्थापना
विदेशी मिश्र। Marsa आलम - एक अद्वितीय र शान्त रिसोर्टमा